दर्शकलाई अर्जुन कुमारको कोशेली ‘फाटेको जुत्ता’ (भिडियो रिपोर्ट सहित ) के दर्शकको साथ् पाउला चलचित्रले ? - Enepalese.com
दर्शकलाई अर्जुन कुमारको कोशेली ‘फाटेको जुत्ता’ (भिडियो रिपोर्ट सहित ) के दर्शकको साथ् पाउला चलचित्रले ?
इनेप्लिज २०७४ कार्तिक १७ गते १:०८ मा प्रकाशित
गीत र आकर्षक ट्रेलरका कारण चर्चामा रहेको नेपाली चलचित्र फाटेको जुत्ता कात्तिक १७ देखि रिलिज हुन लागेको छ । कात्तिक १७ लाई प्रदर्शन तिथी तय गरिएको यो चलचित्र यो दिन देखि अल नेपाल रिलिज हुने छ । अहिलेको चर्चित नायक सौगात मल्ल यो चलचित्रमा फरक भुमिकामा देखिदै छन् । उनलाई अहिलेकी चर्चित नायिका प्रियंका कार्किले साथ दिएकी छिन् । चलचित्रको ट्रेलरमा देखाएको दृष्य अनुसार यो चलचित्र हाास्यव्यंग्यात्मक शैलीमा समाजमा हुने गरेका यथार्थतालाई उतार्न खोजिएको छ । अर्जुन कुमारले निर्माण गरेको यो चलचित्रलाई निकेश खड्काले निर्देशन गरेका छन् ।